कोरोनाबाट विश्वभर कुन देशमा कति संक्रमित ? - Birgunj Sanjalकोरोनाबाट विश्वभर कुन देशमा कति संक्रमित ? - Birgunj Sanjalकोरोनाबाट विश्वभर कुन देशमा कति संक्रमित ? - Birgunj Sanjal
कोरोनाबाट विश्वभर कुन देशमा कति संक्रमित ?
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ०६:३८
भारतमा आइतबार एकै दिन साढे आठ हजार भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।आइतबार भारतमा आठ हजार ७ सय ८२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। योसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या १ लाख ९० हजार ६ सय ९ पुगेको छ।वल्र्डओमिटरका अनुसार अहिलेसम्म भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ५ हजार ४ सय ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।आइतबार मात्रै त्यहाँ संक्रमणबाट २ सय २३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
भारतमा अहिलेसम्म ९१ हजारभन्दा धेरै संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्।यसैबीच विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ६२ लाख ५९ हजार ५ सय ३३ पुगेको छ। सोमबार बिहान ६ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार आइतबार मात्रै विश्वभर १ लाख ९ हजार ९१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
अहिलेसम्म संक्रमणबाट विश्वभर ३ लाख ७३ हजार ६ सय ९१ जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार मात्रै विश्वभर ३ हजार १ सय ८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।आइतबार अमेरिकामा ६३३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ६ हजार १ सय ९१ पुगेको छ।त्यसैगरी आइतबार ब्राजिलमा ४८०, मेक्सिकोमा ३६४, क्यानाडामा २२१, रुसमा १३८, बेलायतमा ११३, पेरुमा १३५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।